UBaxter usememezele isikwati seBafana esizobhekena neNigeria | News24
Cape Town – Umqeqeshi omusha weBafana Bafana usememezele isikwati sabadlali abangu-25 esizobhekana neNigeria emdlalweni wokuvula wokuhlungela imidlalo ye-2019 Africa Cup of Nations (AFCON).
Lo mdlalo uzodlalwa ngoMgqibelo, ngomhlaka-10 kuJune, eGodswill Akpabio International Stadium e-Uyo State, eNigeria.
UBaxter ubagcinile abadlali abaningi ababeyingxenye yesikwati esabhekana neGuinea-Bissau kanye ne-Angola emidlalweni yobungani eyadlalwa ngokulandelana ngoMashi.
Unozinti uRonwen Williams, uBongani Zungu kanye noTokelo Rantie sebeshaye ibuya eqenjini lesizwe.
OLUNYE UDABA: Umphathi kaJali uchitha imibiko yokuthi uzobuyela ku-PSL
U-Aubrey Ngoma weCape Town City naye ube ngabanye bababiziwe.
“Ngijabule kakhulu ngesikwati esisihlanganisile. Sinenhlansi encane yokuthuthukisa ngabadlali abambalwa abancane. Siphinde sibe nabanye abadlali ababuyayo esikwadini, abadlali abafana noZungu kanye noRantie,” kusho uBaxter njengoba ecashunwe kanjalo kwi-website yeSAFA.
“Sinabadlali abebelokhu bevelele ku-PSL isizini yonke, siphinde sibe nokuqhubeka ngenqwaba yabadlali iSAFA esitshale isikhathi esiningi kubona futhi sinabo esikwadini. Ngicabanga ukuthi sinokuxuba okuhle.”
INingizimu Afrika isibhekane neNigeria izikhathi ezingu-12, nalapho leli qembu elisentshonalanga ne-Afrika selinqobe izikhathi eziyisikhombisa, base badlala ngokulingana emidlalweni emine.
Umdlalo okuwukuphela kwawo iBafana Bafana eyake yawuwina ibhekene neNigeria kwaba umdlalo okwakuqeqesha kuwo yena uBaxter – nalapho kwakuwumdlalo wobungani ngonyaka ka-2004 owawudlalelwa e-Ellis Park.
Umdlalo weBafana Bafana neNigeria uzodlalwa ngo-18:00 kusihlwa (ngokwesikhathi saseNingizimu Afrika).